Semalt: Karazan-tsafidy WordPress izay azonao atao
WordPress dia iray amin'ireo sehatra fitantanana ankapobeny indrindra ary manampy amin'ny fananganana tranonkala sy bilaogy matihanina. Mifototra amin'ny antontan'isa farany indrindra, WordPress dia ampiasain'ny bilaogera sy webmasters maherin'ny fitopolo santimetatra. Alohan'ny hananganana tranokala dia mila anaran-toerana sy fampiantranoana ianao. Amin'ny farany, ireo fitaovana rehetra, sy ireo plugins rehetra dia ahafahanao mamorona tranonkala mahafinaritra, manomboka amin'ny bilaogy manokana ho an'ireo marika an-tserasera.
Oliver King, manam-pahaizana matihanina Semalt , dia manoro hevitra ny amin'ny fijerena ny karazana tranonkala azonao atao amin'ny fampiasana WordPress.
WordPress dia nanomboka ny diany ho toy ny sehatra fitoraham-blaogy tsotra ary nivadika ho rafitra matihanina matihanina. Tao anatin'izay taona vitsy izay, tranonkala sy blaogy an-jatony maro no niorina tamin'ny WordPress. Maivana kokoa izy ireo, matotra sy be pitsiny mihoatra noho ny hatramin'izay ary afaka miana-javatra betsaka amin'ireo bilaogy ireo. Wordpress dia manana fitaovana sy loha-hevitra marobe mba hisafidianana, ary afaka mampivelatra bilaogy na tranokala manokana mora ianao
Ho an'ny mpandraharaha sy ny marika, WordPress no fomba tsara indrindra sy mahazatra indrindra hampivelarana tranokalam-pikarohana ao anatin'ny minitra. Efa sambany ireo marika sy orinasa goavana no mampiasa WordPress mba hanamafisana ny tranokalany satria manome azy ireo tombontsoa maro hampitombo ny asany.
3. Page profil de tsimiamboholahy
Ny Wordpress dia lasa vahaolana ho an'ny vahaolana ary nanampy tamin'ny fananganana tranokala e-commerce. Ny plugins sy ny tanjony mahatalanjona dia mahatonga anao ho mora kokoa amin'ny famolavolana tranonkala safidy. Ny sasany amin'ireo plugins malaza dia WooCommerce, WPEcommerce, aryEasy Digital Downloads, izay manampy amin'ny fampivoarana ny tranokalanao amin'ny sehatra e-commerce manontolo sy ny varotra. Manampy anao hanaiky ny fandoavam-bola amin'ny Internet, mitantana ny lisitra, ny haba, ny sambo, ary ny mpanjifa eny ambany tafo iray..
Raha mikasa ny hampivelatra birao amin'ny aterineto ianao dia afaka manandrana ny WordPress. Misy tranonkala malaza toy ny Problogger sy Smashing Magazine mampiasa WordPress mba hampivoarana tranonkala mahafinaritra. Ity rafitra fitantanana votoaty ity dia mamela antsika hamorona asa fisokajana izay ahafahan'ny mpampiasa mametraka mora foana ny lisitry ny asa, ary ny manam-pahaizana dia afaka mandefa amin'ny aterineto.
Toy ireo boay momba ny asa, misy ny fangatahana avoakan'ny orinasa fandraharahana, ary ny WordPress dia manana vahaolana amin'ny sehatry ny orinasam-pandraharahana mifototra amin'ny fifidianana. Azonao atao ihany koa ny mamorona vavahadin-tserasera izay tsy voafetra amin'ny orinasa tokana.
6. Fanontaniana sy valiny tranonkala
Raha mikasa ny hamorona pejy Stack Exchange, Quora sy Yahoo ianao, dia afaka manatsara ny asanao ny WordPress. Ampifandraiso amin'ny fitaovana sy plugins ny fitaovana fitantanana ny aterineto ary atombohy amin'ny fiarahamonina mavitrika amin'ny aterineto izany.
7. Tranonkala tsy ara-dalàna sy ara-pinoana
Miaraka amin'ny WordPress, dia haingana sy mora ny mamorona tranonkala tsy mendrika sy ara-pivavahana. Manana plugins manokana izy io, ary afaka manampy mora foana ny endrika fanomezana sy vola raisina. Azonao atao ihany koa ny manaiky ny fanomezana avy amin'ny PayPal, ary izany rehetra izany dia noho ny WordPress.
Raha mila ny toerana tsara indrindra hanehoana ny portfolio ianao dia tokony hampidirinao ao amin'ny tranonkalanao WordPress. Io no hany fitaovana fitantanana ny votoaty izay manampy anao hamorona sary mihaja sy gitara mahagaga mba hahafantaran'izao tontolo izao ny fahaizanao sy ny talentanao.
9. Tranonkala Coupon
Raha te-hahazo ny kaominina avy amin'ny toerana an-jatony ka hatramin'ny an'arivony ianao, izay manolotra fihenam-bidy manokana momba ny vokatra sy ny serivisy, dia tokony hanangana tranokala manokana ianao ary manomboka. Wordpress dia afaka manampy, manantanteraka ary mandany ny tapakila an-tserasera. Azonao atao ihany koa ny mandany sy mifidy ny tapakila, ary izany rehetra izany dia atao amin'ny alàlan'ny panontana WordPress admin.
10. Tranonkala Auction
Raha mitady tranokala toy ny eBay izay toerana misy ny fivarotana isan'andro, dia azonao atao ny mampiasa WordPress mba hamoronana tranonkala varotra tanteraka. Ireo mpampiasa dia afaka manolotra, manefa ny saram miafina amin'ny safidy azo antoka ary hahazo vola be avy amin'ny tranokalam-pivarotana Source .